Sida loo soo dejinta AVI Videos in Final Cut Pro on Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > FCP > Sida loo soo dejinta AVI Videos in ay Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Sida loo soo dejinta AVI Videos in Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Sida aad ogtahay, ugu files AVI isticmaali DivX, Xvid ama 3ivX codecs riixo. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel AVI files on Final Cut Pro, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo in ay qaabab ay socon hore, kuwaas oo MP4. MOV, M4V, ama DV.
Si loogu badalo AVI in Pro Goo Final muuqan iyo effortlessly, AVI in Final Cut Pro Converter si weyn lagu talinayaa. Waxay dhoofin karaan encoders xirfad, kuwaas oo Apple Dhexe codec, ProRes iyo DNxHD ku haboon iMovie, FCP iwm ugu fiican. Ka dib qaab beddelidda, waxaad ka heli doontaa faylasha la gediyay waxaa lagu sameeyey oo keliya ee aad FCP, waxaad si fudud oo si habsami leh iyaga edit karaa dadaal lahayn oo isla wadaagaan videos dhex Shabakadaha.
Download Free version maxkamad ay halkan:
Tallaabada hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo badalo AVI in Final Cut Pro X
Marka hore, Burcad cut final Converter avi pro, guji File Media Load Faylal ay ka weyn ee menu xitaa aad drive computer adag dooro files AVI aad rabto in aad si loogu badalo ka. Ama waxaad si fudud u jiidi--iyo dhibic karo files galay codsigan diinta.
Tani waa shaashada ee AVI in p cut final Converter ro x, waa horyalka Talyaaniga iyo awood leh.
Labaad, Riix labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan ayaa, ka dibna dooro Pro Goo Final ka category ayeey ka. Riix Output hoose wuxuu ka tegey dadkii suuqa kala barnaamijka, waxaad dooran kartaa buuga u helidda files gediyay.
Saddexaad, bilowdo qaab beddelidda. Marka dhan goobaha lagu sameeyey, kaliya ka dhacay Beddelaan si Converter bilaabi doonaan diinta avi in la dhimo final x pro isla markiiba.
AVI (Audio Video daraa) files yihiin qaab guud oo loo Tifaftirayaasha video clips. Sida weelka video ah, waxaa ku jiri kara audio / video Tifaftirayaasha isticmaalaya kala duwan codecs kala duwan (tani waxay la mid tahay file .mp4 ah midkood la isticmaalayo riixo MPEG4 ama H264 riixo). Tayada video file AVI waa sida caadiga ah ka fiican. Iyo qaabka AVI waxaa uu taageero ballaaran ee kala duwan oo badan ee hababka qalliinka iyo qalabka. Faa'iida ee AVI waa in heerka riixo ma aha universal. Heerka riixo kala duwan daalinayn halka ciyaaro file AVI ah Tifaftirayaasha in heerka hore ee ciyaaryahanka cusub windows media. Waxaa laga yaabaa inaad qabto qaar ka mid ah filimada torrent ama ay muujinayso TV qaab AVI, ama qaar ka mid ah footages AVI qoyska ka kaamirada aad digital, sida Cannon fiidiyo ama telefoonka gacanta badbaadiyey ku wadid aad Mac ee adag.
Free Isku day AVI in FCP Converter u Mac Hadda Buy AVI in FCP Converter u Mac Hadda
Final Cut Pro X: baaqiga-Frames iyo Motion gaabis ah
Sida loo Edit MP4, MKV, FLV, MOV iyo qaabab kale la VirtualDub
FCP X: Si aad u dar Raadka
Sida loo abuuro a Picture-in-Picture Saamaynta Isticmaalka Final Cut Pro X
The Best Final Cut Pro Alternative for Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Sida loo Ma Correction Color ee Pro Goo dambays ah Mac
Sida loo soo dejinta MTS in iMovie
Sida loo soo dejinta wmv in iMovie?
Sida loo soo dhoofsadaan mp4 in iMovie
15 Cut Pro X Tutorial iyo Tababarka Shabakadaha Final
FCP X: Abuur ah Chroma-Muhiimka ah (Green-screen) Saamaynta
Maamul Maktabadaha ee Final Cut Pro X